सरकारले बजेट दिँदा पनि प्रहरीको रासनभत्ता बढेन ! - Everest Dainik - News from Nepal
सरकारले बजेट दिँदा पनि प्रहरीको रासनभत्ता बढेन !
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नयाँ दररेटअनुसार रासनभत्ता खुवाउन सरकारले नेपाल प्रहरीलाई बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । तर, भदौ तेस्रो सातासम्म पनि प्रहरीले पाएका छैनन् ।
सरकारले औपचारिक निर्णय नगर्दा बजेट भएर पनि प्रहरीले मूल्यवृद्धि अनुसारको रासनभत्ता नपाएका हुन् । रासनभत्ता समायोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गृह मन्त्रालयले नै हालसम्म यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको छैन ।
याे पनि पढ्नुस पाँच वर्षको लागि सरकार दिन्छौं भनेका थियौँ, त्यो हामीले दिएका छौंः अध्यक्ष प्रचण्ड
याे पनि पढ्नुस डिआइजी आशा सिंह एआइजी बढुवामा सिफारिस
तीन वर्षअघि गृहका तत्कालीन सहसचिव चक्रबहादुर बुढा नेतृत्वको समितिले २–२ वर्षमा रासनभत्ता समायोजन गर्न सुझाब दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: नेपाल प्रहरी, रासनभत्ता, सरकार